Rules of Foreign Scholarship
စင်္ကာပူနိုင်ငံ “S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS)” ကပေးအပ်မယ့် ၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်အတွက် မဟာဘွဲ့ နဲ့ ပါရဂူဘွဲ့သင်တန်းများကို သတ်မှတ်အရည်အချင်းများနဲ့ ပြည့်မီသူများသက်ဆိုင်ရာ Website သို့ ဝင်ရောက်လေ့လာ၍ ယှဉ်ပြိုင်လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အကြောင်းကြား လာပါသည်။ လျှောက်ထားနိုင်သည့် ဘာသာရပ်များမှာ... ၁ - M.Sc (Asian Studies) ၂ - M.Sc (International Political Economy) ၃ - M.Sc (International Relations) ၄ - M.Sc (Strategic Studies) ၅ - NTU- Warwick Double Masters Programme နှင့် ၆ - Ph.D Programme တို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ပညာသင်ဆုများကို သတ်မှတ်အရည်အချင်းများနဲ့ ကိုက်ညီသော ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ် အလုပ်အမှုဆောင်များနှင့်ဝန်ထမ်းများ၊ ညီနောင်အသင်းမှ အမှုဆောင်များနှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ ကုန်သည်စက်မှု အသင်းချုပ် အသင်းဝင်ကုမ္မဏီများ၏ အဖွဲ့ဝင်များ (သို့) ဝန်ထမ်းများ လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ လျှောက်ထားရန် စိတ်ပါဝင်စားပါက အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို Website : www.rsis.edu.sg/gpo သို့ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပြီး အသင်းချုပ်ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်စာဖြင့် သက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်၏ Website တွင် သတ်မှတ်ရက်ထက် နောက်မကျဘဲ လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ အသင်းချုပ်၏ ခွင့်ပြုချက်ရယူလိုပါက စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိချုပ်ထံ လိပ်မူ၍ ကိုယ်တိုင်ရေး လျှောက်လွှာ (၁) စောင်၊ လျှောက်ထားသူ၏ CV ၊ ဓါတ်ပုံ၊ အသင်းဝင်ကဒ် မိတ္ထူ၊ မှတ်ပုံတင်မိတ္ထူတို့ကို ပူးတွဲ၍ အသင်းချုပ်နှင့် ညီနောင်အသင်းများမှ အမှုဆောင်/ဝန်ထမ်း၊ အသင်းချုပ်၊ အသင်းဝင်ကုမ္ပဏီများမှ အဖွဲ့ဝင် (သို့) ဝန်ထမ်း ဖြစ်ကြောင်းထောက်ခံစာတို့နှင့်အတူ လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက HRD ဌာန၊ ဖုန်းနံပါတ် ☎️ ၀၁ -၂၃၁၄၃၄၄ ~ ၄၉၊ Ext: ၁၃၃၊ ၁၃၄ သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။ ပညာရေးလမ်းညွှန်website တွင်မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ပြောင်းလဲနေသော ပညာရေးအခြေအနေများ၊ အခမဲ့ ပညာရေးသင်ကြားပေးနေသည့် သင်တန်းကျောင်းများ၊ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပပညာသင်ဆုများ၊ ပညာရေးအတွက် သင်တန်းများ၊ အလုပ်ခွင်ဝင်ရန် လိုအပ်သော သင်တန်းများ စသည်တို့ပါဝင်ပါတယ်နော်...။ source: ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်
Thursday, 04 October 2018 13:51
Master Degree အတွက်ပေးတဲ့ Full Scholarship
Sweden နိုင်ငံက ချီးမြင့်တဲ့ Full Scholarship ပညာတော်သင်ဆုပါ။ 1 or2years Master Degree အတွက်ပေးတဲ့ Full Scholarship program ဖြစ်ပါတယ်နော်...။ နှစ်စဉ် နိုင်ငံ ၁၄၀ လောက်က လျှောက်ထားသူ ထောင်ဂဏန်း ရှိပါတယ်။ ဒီအထဲကမှ ပညာတော်သင် ၃၁၀ ဦးခန့်ကို စိစစ်ရွေးချယ်ပြီးချီးမြင့်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကို စ ပြီးချီးမြင့်တာ ဆယ်စုနှစ် ၁ ခုမပြည့်သေးပေမယ့်လည်း မြန်မာပြည်ကို သူတို့ရဲ့ Priority အဆင့် ၃ ခုထဲမှာ အဆင့် ၁ ပေးထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာ ကျောင်းသားတွေအတွက် လက်မလွတ်သင့်တဲ့ အခွင့်အရေးတခုပါ။နောက်ပြီး အခွင့်ရေးတခုက Interview ဖြေစရာမလိုပါဘူး။ ဘယ်လိုလျှောက်မလဲ? ပထမအဆင့် အနေနဲ့ University application process အတွက် University Admission ဆိုတဲ့ link မှာ ကိုယ်တိုင်လျှောက်ရပါမယ်။(https://www.universityadmissions.se/intl/start ) ဒုတိယအဆင့်မှာမှ Scholarship Application ပါ။ Scholarship program က သီးခြား body အဖြစ်ရပ်တည်ပါတယ်။ သီးခြားလျှောက်ရပါမယ်။ ဆိုလိုချင်တာ ကျောင်းသက်သက်လျှောက်၊ scholarship သက်သက်လျှောက် ရပါမယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့အချင်းချင်း အချိတ်အဆက်ရှိပါတယ်။ Scholarship program ဘက်က သူတို့ချီးမြှင့်ပေးလိုတဲ့ Master ဘွဲ့တွေကို သူတို့ web မှာ တင်ထားပေးပါတယ်။ ကျောင်းလျှောက်တဲ့အခါ ဒီဘွဲ့တွေကိုပဲရွေးချယ်လျှောက်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ကျောင်းက တက်ခွင့် ရပြီဆိုမှ scholarship က စဉ်းစားတာပါ။ ကျောင်းလျှောက်တဲ့အဆင့်မှာပဲ မပါခဲ့ရင် ပြီးပါပြီ။ ဒီ Scholarship link လေးကို ဝင်လေ့လာလိုက်ရင် အသေးစိတ် ရှင်းလင်းသွားပါလိမ့်မယ်နော်...။(https://si.se/…/schol…/swedish-institute-study-scholarships/) ကျောင်းလျှောက်နိုင်ချိန်ဟာ Oct လလယ်ကနေ Jan လလယ်အထိ ၃ လ ပေးထားပါတယ်။ ကျောင်းက IELTS လိုပါတယ်၊ သင်ရမယ့် Master ပေါ်မူတည်လို့ Band score ကို 5.5 မှ 7.5 အထိ တောင်းပါတယ်။ Application fees ပေးရပါတယ်၊ USD 100 ပတ်ဝန်းကျင်ပါ။ ခုချိန်ကစလို့ ပြင်ဆင်သင့်ပါပြီ။ ပညာရေးလမ်းညွှန်website တွင်မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ပြောင်းလဲနေသော ပညာရေးအခြေအနေများ၊ အခမဲ့ ပညာရေးသင်ကြားပေးနေသည့် သင်တန်းကျောင်းများ၊ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပပညာသင်ဆုများ၊ ပညာရေးအတွက် သင်တန်းများ၊ အလုပ်ခွင်ဝင်ရန် လိုအပ်သော သင်တန်းများ စသည်တို့ပါဝင်ပါတယ်နော်...။ Crd> Aung Khun Cheik
Master Degree Full Scholarship from Sweden
ဂျပန်နိုင်ငံ Young Leaders’ Program (YLP) ပညာသင်ဆု လျှောက်ထားနိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။ “Young Leaders’ Program (YLP)” အစီအစဉ်ဖြင့် Master of Business Administration (MBA) (၁)နှစ် ပညာသင်ဆု အစီအစဉ် လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်းကို ဂျပန်နိုင်ငံ Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (Monbukagakusho: MEXT) မှတဆင့် သိရှိရပါတယ်။ အဆိုပါ ပညာသင်ဆုသို့ - - ကုန်သည်စက်မှု အသင်းချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်၊ အလုပ်အမှုဆောင်များနှင့် ၀န်ထမ်းများ၊ - ညီနောင်အသင်းများမှ အမှုဆောင် (သို့) ၀န်ထမ်းများ၊ - ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ် အသင်းဝင်ကုမ္ပဏီများ၏ အဖွဲ့ဝင်များ (သို့) ၀န်ထမ်းများ လျှောက်ထားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လျှောက်ထားသူများအနေနဲ့ ဖြည့်စွက်ထားသော Application Form နှင့်အတူ ကိုယ်တိုင်ရေး လျှောက်လွှာ၊ ပညာအရည်အချင်း ထောက်ခံချက်မိတ္တူများ၊ အသင်းချုပ်နှင့် ညီနောင်အသင်းများမှ အမှုဆောင် (သို့) ၀န်ထမ်း၊ ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ် အသင်းဝင်ကုမ္ပဏီများမှ အဖွဲ့ဝင် (သို့) ၀န်ထမ်းဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံစာ၊ Passport မိတ္တူ (သို့) မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ ဓါတ်ပုံ (၃) ပုံ နှင့် UMFCCI အသင်းဝင်ကဒ်မိတ္တူများ ပါဝင်သော စာရွက်စာတမ်းများ မိတ္တူ (၂)စုံ တို့ကို ပူးတွဲ၍ ၁၂.၁၀.၂၀၁၇ (သောကြာနေ့) ရုံးချိန်အတွင်း နောက်ဆုံးထား၍ လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို HRD ဌာန၊ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၂၃၁၄၃၄၄ ~ ၄၉၊ Ext: ၁၃၃၊ ၁၃၄ ၊ ၀၁-၂၃၁၇၄၈၀ သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပြီး၊ Application Form များကို အသင်းချုပ် HRD ဌာနသို့ ရုံးချိန်အတွင်းလာရောက် ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ပညာရေးလမ်းညွှန်website တွင်မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ပြောင်းလဲနေသော ပညာရေးအခြေအနေများ၊ အခမဲ့ ပညာရေးသင်ကြားပေးနေသည့် သင်တန်းကျောင်းများ၊ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပပညာသင်ဆုများ၊ ပညာရေးအတွက် သင်တန်းများ၊ အလုပ်ခွင်ဝင်ရန် လိုအပ်သော သင်တန်းများ စသည်တို့ပါဝင်ပါတယ်နော်...။ source: ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ် (UMFCCI)
KGSP - ကိုရီးယား အစိုးရ ပညာသင်ဆု အစီအစဉ် (Associate Degree) အတွက် လျှောက်ထားနိုင်ပြီ။ World Korea မှတဆင့် လျှောက်ထားနိုင်သော ကျောင်းများ - Korea University of Media Arts - Gumi University - ChejuHalla University ကိုရီးယား အစိုးရ ပညာသင်ဆု အစီအစဉ်သည် ကိုရီးယားနိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်များတွင် Associate Degree အတန်း တက်ရောက်လိုသော နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားများအတွက် ပညာသင်စရိတ် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန် နှင့် နိုင်ငံများအကြား ချစ်ကြည်ရင်းနီးမှုကို ပိုမိုရရှိစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် နှစ်စဉ် ပေးအပ် ချီးမြှင့်သော အစီအစဉ် တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ပညာသင်ဆု ရရှမည့် ကာလ - ကိုရီးယားဘာသာစကား ၁ နှစ် နှင့် Associate Degree ၂/၃ နှစ် ပညာသင်ဆု လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ချက်များ • ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားရန် အကျုံးဝင်သော နိုင်ငံမှ နိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်။ • အသက် ၂၅ နှစ် အောက် ဖြစ်ရမည်။ • ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရမည်။ • အထက်တန်း အောင်မြင်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ (Bachelor ဘွဲ့ ရရှိထားပြီးသူများ လျှောက်ထားခွင့်မရှိပါ။ ) • တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအမှတ် စုစုပေါင်း အနည်းဆုံး၄၅ဝ (တစ်ဘာသာ ပျမ်းမျှ ၇၅ မှတ်) နှင့် အထက် ရရှိရမည် ။ • နိုင်ငံခြား ခရီးသွားလာနိုင်ရမည်။ • ကိုရီးယားဘာသာစကား သို့ မဟုတ် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်မှုရှိသူများအား ဦးစားပေးမည်။ • ပညာသင်ဆု လျှောက်ထားနိုင်သော တက္ကသိုလ်များ အနက် တစ်ခုကိုသာ ရွေးချယ်ရမည်။ တက္ကသိုလ် တစ်ခုထက် ပို၍ လျှောက်ထားသောသူများကို ရွေးချယ်မည်မဟုတ်ပါ။ ပညာသင်ဆုမှ ရရှိမည့် ခံစားခွင့်များ • ပညာသင် သွားရောက်ရန် အသွားအပြန် လေယာဉ် လက်မှတ် • တစ်လလျှင် ထောက်ပံ့ကြေး တစ်လ ဝမ် ၈ သိန်း • ကိုရီးယားဘာသာစကား ၁ နှစ် နှင့် Associate Degree ၂ နှစ် အတွက် ကျောင်းလခ • ကျန်းမာရေး အာမခံ • TOPIK Level5သို့ TOPIK Level6ရရှိထားသော ကျောင်းသားများအတွက် ချီးမြှင့်ငွေ တစ်လ ဝမ် ၁ သိန်း • ပညာသင်ယူမှုပြီးဆုံးပါက ချီးမြှင့်ငွေ ဝမ် ၁ သိန်း • ကိုရီးယားရောက်ရောက်ချင်း အသုံးပြုရန် ဝမ် နှစ်သိန်း ကိုရီးယား အစိုးရ ပညာသင်ဆု အစီအစဉ် နှင့် ပတ်သတ်၍ အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက - CALL 09250111311, 09798827347 ပညာရေးလမ်းညွှန်website တွင်မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ပြောင်းလဲနေသော ပညာရေးအခြေအနေများ၊ အခမဲ့ ပညာရေးသင်ကြားပေးနေသည့် သင်တန်းကျောင်းများ၊ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပပညာသင်ဆုများ၊ ပညာရေးအတွက် သင်တန်းများ၊ အလုပ်ခွင်ဝင်ရန် လိုအပ်သော သင်တန်းများ စသည်တို့ပါဝင်ပါတယ်နော်...။ source: world korea myanmar
Associate Degree Scholarship from Japan
ကိန်းဘရေ့ခ်ျတက္ကသိုလ်တွင် ပညာသင်ဆုရရန်အခွင့်အရေး(သို့မဟုတ်) Gates Cambridge Scholarships for International Students ဒီစကောလားရှစ်က ဘီလျှံနာသူဌေးကြီး ဘေလ်ဂိတ်နဲ့ ဇနီး မယ်လင်ဒါဂိတ်က ပေးတဲ့ စကောလားရှစ်ပါ.. ယူကေမှာ ကျောင်းတက်ချင်ပါတယ်၊ ကိန်းဘရေ့ခ်ျလို ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်မျိုးမှာ ပညာသင်ချင်ပါတယ်၊ ပြီးတော့ ကိုယ့်ဘာသာလည်း တော်တယ်လို့ ယုံကြည်မှုရှိတယ်ဆိုရင် ဒီစကောလားရှစ်ဟာ လက်မလွတ်စတမ်း လျှောက်သင့်တာပါ။ မြန်မာပြည်လို ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေအတွက် သီးသန့်ပေးတာ မဟုတ်ဘဲ တကမ္ဘာလုံးက ယူကေနိုင်ငံအပြင်က ဘယ်နိုင်ငံသားမဆို ပေးလျှောက်လို့ အပြိုင်အဆိုင်များတာတော့ မှန်ပါတယ်.. ဒါပေမယ့် ဒီလောက်နဲ့တော့ အားမလျှော့စေချင်ပါဘူး.. ဘာလို့ဆို ဒီစကောလားရှစ်က ၂၀၁၈အတွက် ဒီစကောလားရှစ်က ကျောင်းသားအယောက်(၉၀)စာ ပေးမှာမို့ပါပဲ။ ဒီပညာသင်ဆုကို ရခဲ့ရင် ကိန်းဘရေ့ခ်ျတက္ကသိုလ်မှာ အချိန်ပြည့် မာစတာဘွဲ့တန်း ဒါမှမဟုတ် Ph.D ဘွဲ့ သင်ယူသုတေသနပြုရမှာဖြစ်ပြီး ဘယ်သူတွေ လျှောက်ခွင့်ရှိလဲဆိုရင်တော့ ယူကေနိုင်ငံသား မခံထားသူတိုင်း လျှောက်ခွင့်ရှိပါတယ်.. လျှောက်ထားနိုင်တဲ့အတန်းတွေကတော့ ▪️ Ph.D (Three year research-only Degree) ▪️ MSc or MLitt (Two year research-only Degree) ▪️ One Year postgraduate course (eg. MPhil, MAST, Diploma,MBA etc.) တို့ ဖြစ်ပါတယ်.. အသက်ကန့်သတ်ထားတာတော့လည်း မရှိပါဘူး.. အခုမှ ကျောင်းပြီးကာစ လူငယ်များထက် လူလတ်ပိုင်း အလုပ်အတွေ့အကြုံ အခိုင်အမာရှိထားသူများနဲ့ ပိုသင့်လျော်ပါတယ်။ ဘာသာရပ်အားဖြင့် ကန့်သတ်ချက်ကို ထည့်မရေးထားတာမို့ ယေဘုယျအားဖြင့် ကိန်းဘရေ့ခ်ျတက္ကသိုလ်မှာ သင်ကြားတဲ့ ဘာသာရပ်တိုင်းလိုလိုထဲက ရွေးချယ်လျှောက်ထားလို့ ရဟန်ရှိပါတယ်.. Undergraduate တန်းတွေ, အချိန်ပိုင်းအတန်းတွေနဲ့ MD Doctor of Medicine Degree, MBBChir Clinical Studies တွေတော့ လျှောက်ထားခွင့်မရှိပါဘူး။ ဘယ်လိုလျှောက်ထားရမလဲဆိုရင် ကိန်းဘရေ့ခ်ျတက္ကသိုလ်ရဲ့ ပင်မဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေ ကိုယ်လျှောက်ထားချင်တဲ့ ဘာသာရပ်နဲ့ အတန်းကို အရင်ရွေးရပါမယ်။ လျှောက်တဲ့အခါ Course Deadline နဲ့ Funding Deadline နှစ်ခုရှိပြီး ပိုစောတဲ့ Deadline အမီ လျှောက်ရပါမယ်.. သတိထားရမှာက Deadline တိုင်းဟာ သတ်မှတ်ရက်ရဲ့ ယူကေစံတော်ချိန် နေ့လယ်(၁၂) နာရီဖြစ်ပါတယ်.. အမှားမခံပါဘူး.. လျှောက်ထားတဲ့အခါမှာ Cambridge University ရဲ့ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်သတ်မှတ်ချက်တွေကို မီဖို့လိုသလို Gates Cambridge Statement ကိုလည်း ရေးဖို့လိုပါတယ်.. စာလုံးရေ ငါးရာနဲ့ သုံးထောင်ကြားမှာ ဒီစကောလားရှစ်ကို ဘာကြောင့်လျှောက်ထားတယ်ဆိုတာနဲ့ အောက်ပါအချက်လေးချက်နဲ့ ကိုယ်ဟာပြည့်စုံသူဖြစ်ကြောင်း အရွေးခံချင်စရာကောင်းအောင် တင်ပြနိုင်သူဖြစ်ရပါမယ်.. လျှောက်ထားလိုသူတွေဟာ ▪️ ဉာဏ်ပညာထူးချွန်သူ (ပညာရေးနောက်ခံပိုင်းကို ယှဉ်ကြည့်ပြီး အတော်ဆုံးတွေကို ရွေးပါမယ်) ▪️ ခေါင်းဆောင်ရပ်ပိုင်း အလားအလာရှိသူ (ယခင်က ခေါင်းဆောင်ရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစွမ်းအစ အတွေ့အကြုံတွေကို အကဲဖြတ်မှာဖြစ်ပြီး ခေါင်းဆောင်ရပ်ဆိုင်ရာပိုင်းထဲကမှ အခြားသူတွေကိုပါ ကိုယ်နဲ့အတူ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် လုပ်ပေးနိုင်သူတွေကို ဦးစားပေးရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်) ▪️ အခြားသူတွေရဲ့ လူနေမှုဘဝကို မြှင့်တင်ပေးလိုစိတ်ရှိသူ (လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် ပိုကောင်းအောင် မြှင့်တင်ကြိုးပမ်းလိုစိတ်ရှိသူ ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်) ▪️ ကိန်းဘရစ်ခ်ျမှာ လျှောက်ထားတဲ့ postgraduate programme ရယ်၊ လျှောက်ထားသူရဲ့ အရည်အချင်းနဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေရယ်ဟာ ဆက်စပ်မှု (ကိုက်ညီမှု) ရှိနေရပါမယ်။ (ဘာ့ကြောင့် Cambridge မှာ ဘယ် postgraduate Programme ကို တက်လိုတယ်ဆိုတာ ကောင်းစွာတင်ပြနိုင်သူ ဖြစ်ရပါမယ်..) ဒါ့အပြင် လျှောက်ထားသူတွေဟာ CV/ Resume တွေ တွဲတင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ သုံးလေ့ရှိတဲ့ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း CVထက် ကျော်လွန်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ပညာအရည်အချင်း၊ အလုပ်အတွေ့အကြုံတို့ကို အပြည့်အဝဖော်ပြနိုင်မယ့် နိုင်ငံတကာ Resume ပုံစံနဲ့ လျှောက်ထားသင့်ပါတယ်.. Ph.D ပါရဂူဘွဲ့တန်းကို လျှောက်မယ်ဆိုရင်တော့ Research Proposal ပါ တွဲတင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထောက်ခံစာအနေနဲ့က (၂)စောင်လိုမှာ ဖြစ်ပြီး မိသားစုဝင်နဲ့ သူငယ်ချင်းဆွေမျိုးတွေဆီက မဟုတ်သ၍ ဘယ်သူ့ဆီက ထောက်ခံစာဖြစ်ရမယ်လို့ မကန့်သတ်ထားပါဘူး.. အဓိကကတော့ Gates Scholarship အကြောင်း သိသူ၊ လျှောက်ထားသူရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုအလားအလာနဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် ဘယ်လောက်မြှင့်တင်နိုင်စွမ်းရှိမယ်ဆိုတာကို ကောင်းကောင်းနားလည်သူဖြစ်ဖို့ပါပဲ။ ပုံမှန်အားဖြင့် ပညာရပ်ပိုင်းက ကိုယ်သင်ဖူးတဲ့ ပါမောက္ခဆီက ထောက်ခံစာတစ်စောင်နဲ့ အလုပ်ရှင်ဆီက ထောက်ခံစာတစ်စောင် သုံးကြလေ့ရှိတာပါ.. အရမ်းတော်ပါတယ်လို့ ရေးမယ့်အစား ဥပမာတွေ ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ ဘယ်လို အရည်အချင်းရှိကြောင်း စနစ်တကျထောက်ခံစာ ရေးပေးနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒီ ၂၀၁၉ အောက်တိုဘာလမှာ သင်ယူခွင့်ရမယ့် ပညာသင်ဆုကို ဘယ်တော့စလျှောက်လို့ရမလဲဆို ဒီနှစ် စက်တင်ဘာလ(၃)ရက်နေ့မှ စလျှောက်လို့ ရပြီး Round (1) ဟာ ၁၀/အောက်တိုဘာ/၂၀၁၈ နောက်ဆုံးထား လျှောက်ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်.. Round (2) ကတော့ ကိုယ်လျှောက်ထားတဲ့ ဘာသာရပ်တန်းပေါ် မူတည်ပြီး ၀၅/ဒီဇင်ဘာ/၂၀၁၈ ဒါမှ မဟုတ် ၀၃/ဇန်နဝါရီ/၂၀၁၉ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်...။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ စောစောလျှောက်တာဟာ အကောင်းဆုံးပါပဲ.. ယေယျအားဖြင့် အဆင့်သုံးဆင့်ရှိပြီး ဌာနဆိုင်ရာရွေးချယ်ခြင်း၊ အင်တာဗျူးဖြေရမယ့် ပမာဏစာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်းနဲ့ အင်တာဗျူးအောင်ပြီး စကောလားရှစ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်.. လျှောက်ထားလွှာတွေထဲကမှ အင်တာဗျူးဖြေရမယ့်သူတွေကို ဒီဇင်ဘာနှောင်းပိုင်းမှာ ကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်...။ အင်တာဗျူးအောင်စာရင်းကတော့ ဇန်နဝါရီလထဲမှာ ကြေညာမှာပါ.. မအောင်မြင်သူတွေကိုတော့ ဘာ့ကြောင့်အရွေးမခံရလဲဆိုတဲ့ သုံးသပ်ချက် ထုတ်ပေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး.. ခံစားခွင့်တွေအနေနဲ့ကတော့ စကောလားရှစ်ရခဲ့ရင် ကျောင်းလခအပြီးအစီးအပြင် ကိုယ်ပိုင်အသုံးစရိတ် တစ်နှစ်ကို £17,500 နဲ့ လေယာဉ်လက်မှတ် အသွားအပြန်စရိတ်ပါ ပေးမှာပါ.. ဒါဟာ အကြမ်းဖျင်းတစ်လအသုံးစရိတ် £1,458 မို့ မြန်မာငွေ ၂၉ သိန်းဝန်းကျင်ရှိပြီး လူတစ်ယောက်အသုံးစရိတ်လောက်ရုံမက မြန်မာပြည် ပြန်ပို့နိုင်အောင် ပိုပါတယ်...။ ယူကေဗီဇာလျှောက်ထားခကိုလည်း အဖွဲ့အစည်းက တာဝန်ယူမှာပါ.. Academic development funding အပြင် မိသားစုခေါ်ယူခွင့်လည်း ပေးပြီး ကလေးခေါ်လာရင် ကလေးစရိတ် ထောက်ပံ့ပါတယ်။ စာသင်နှစ်အတောအတွင်း ကိုယ်ဝန်ရှိ ကလေးမွေးခဲ့သော် Maternity/ Paternity funding လည်း ခံစားခွင့်ပြုပါမယ်.. ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အလုပ်/ဌာနက လစာပေးထားရင် ခံစားခွင့်ပမာဏကို အနည်းအကျဉ်း နှုတ်နိုင်ချေ ရှိပါတယ်.. အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက ဒီလင့်ခ်မှာ ဖတ်ပါ.. https://www.gatescambridge.org/apply-overview ဒါက ကျောင်းလျှောက်ဖို့အတွက် ကိန်းဘရေ့ခ်ျတက္ကသိုလ်ရဲ့ လင့်ခ်ပါ.. https://www.graduate.study.cam.ac.uk ဘာသာရပ်ရွေးချယ်ဖို့အတွက်တော့ ဒီလင့်ခ်ကနေ ကြည့်ပါ.. https://www.graduate.study.cam.ac.uk/courses ပညာရေးလမ်းညွှန်website တွင်မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ပြောင်းလဲနေသော ပညာရေးအခြေအနေများ၊ အခမဲ့ ပညာရေးသင်ကြားပေးနေသည့် သင်တန်းကျောင်းများ၊ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပပညာသင်ဆုများ၊ ပညာရေးအတွက် သင်တန်းများ၊ အလုပ်ခွင်ဝင်ရန် လိုအပ်သော သင်တန်းများ စသည်တို့ပါဝင်ပါတယ်နော်...။ Credit - Poe Phyu Thant
Chevening Scholarships သည် ဗြိတိန်အစိုးရ၏ နိုင်ငံတကာမှ ကျောင်းသားများအတွက် ပေးအပ်သည့် ပညာသင်ဆုဖြစ်သည်။ ပေးအပ်မည့်ဘွဲ့မှာ Masters Degree ဖြစ်ပြီး Foreign and Commonwealth Office (FCO) ၏ အထောက်အပံ့ဖြင့် ပေးအပ်မည့် ပညာသင်ဆုလည်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများတွင် ခေါင်းဆောင်နိုင်မှု အရည်အသွေး ပြည့်ဝသူများ ပေါ်ထွက်လာရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမည် ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၆ ရက်နေ့ကို နောက်ဆုံးထားပြီး လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ သို့မဟုတ် အောက်တိုဘာတွင် သင်တန်းစတင်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်သည်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်များတွင် တက်ရောက်ပညာသင်ကြားရမည်ဖြစ်ပြီး အချိန်ပြည့် တက်ရောက်ရမည်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာမှ ကျောင်းသား ၁၅၀၀ ခန့်ကို ခေါ်ယူမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ပညာသင်ဆုရရှိသူများကို ကျူရှင်ကြေး၊ လစဉ်နေထိုင်စားသောက်စရိတ်၊ လေယာဉ်စရိတ် စသည်များ လုံလောက်စွာ ထောက်ပံ့ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်ထားသူများသည် - - Chevening-eligible နိုင်ငံများမှ နိုင်ငံသားများ ဖြစ်ရန်လိုပါသည်။ - ပညာသင်နှစ် ၂ နှစ်ကုန်ဆုံးလျှင် မိမိတို့နိုင်ငံများသို့ ပြန်ရပါမည်။ - ဗြိတိန်နိုင်ငံတက္ကသိုလ်များတွင် တက်ရောက်သင်ကြားနိုင်ရန်အတွက် မိမိတို့ နိုင်ငံများမှ ဘွဲ့တစ်ခုခုကို ရရှိလာသူများ ဖြစ်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ၂ နှစ် ရှိလာရမည်။ - အင်္ဂလိပ်စာစစ်ဆေးမှုကို ခံယူရမည်။ - လျှောက်လွှာကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့ မတိုင်မီ လျှောက်ထားရမည်။ အသေးစိတ်ကို http://www.chevening.org/, http://www.scholars4dev.com/category/country/europe-scholarship/uk-scholarships/ တို့တွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ မိမိတို့ တက်ရောက်လိုသည့် သင်တန်းကျောင်းများနှင့် ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများကို ရှာဖွေလိုပါက ဒီ Link မှာရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ ပညာရေးလမ်းညွှန်website တွင် ပါဝင်သောသင်တန်းများ၊ ကျောင်းများ၊ Scholarship၊ Knowledgeများနှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များကို ၀င်ရောက်ရှာဖွေ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ source: thevoice
JDS ပညာသင်ဆုဖြင့် Japan နိုင်ငံတွင် သင်ကြားမည့် MPH သင်တန်းလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
Master of Public Health (Health Administration / Policy) သင်တန်းတက်မယ့်သူများ လျှောက်လွှာခေါ်ယူနေပြီနော်။ The Project for Human Resource Development Scholarship (JDS) ပညာသင်ဆု အစီအစဉ်ဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ Nagasaki University တွင် (၂၀၁၉-၂၀၂၀)ခုနှစ် ပညာသင်နှစ်အတွက် သင်ကြားပို့ချမည့် Master of Public Health (Health Administration / Policy) သင်တန်းသို့ ပညာသင်စေလွှတ်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါအရည်အချင်းနှင့်ပြည့်စုံသူများသည် သက်ဆိုင်ရာဦးစီး ဌာနမှ တဆင့် လျှောက်ထားနိုင်ပါကြောင်း အကြောင်းကြား အပ်ပါသည်။ လိုအပ်သောအရည်အချင်းများ ၁။ လျှောက်ထားသူနှင့် မိဘနှစ်ဦးစလုံးအပြင် ဇနီး/ခင်ပွန်းသည်လည်း နိုင်ငံသားဖြစ်ရပါမည်။ (ဧည့်နိုင်ငံသားနှင့်ပြုနိုင်ငံသားများကိုလည်း လျှောက်ထားခွင့်ပြုပါသည်။) ၂။ လျှောက်ထားသူသည် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်တွင် အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူဖြစ်ပြီး လျှောက်လွှာပိတ်သည့်နေ့တွင် အနည်းဆုံးအမှန်တကယ် အမှုထမ်းသက်(၂)နှစ် ရှိသူဖြစ်ရပါမည်။ ၃။ လျှောက်ထားသူသည် M.B.B.S/ B.D.S/ B.N.Sc/ B.Comm.H / B.Med.Tech/ B.Pharm/B.M.T.M ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရပါမည်။ ၄။ လျှောက်ထားသူသည် (၁-၄-၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် အသက်(၄၀)နှစ်အောက်ရှိသူဖြစ်ရ ပါမည်။ ၅။ နိုင်ငံခြားတွင် (၆)လနှင့်အထက် သင်တန်းတက်ရောက်ပြီးသူဖြစ်ပါက မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိပြီး အနည်းဆုံး(၃)လ တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးသူဖြစ်ရပါမည်။ ၆။ သင်တန်းမှပြန်လည်ရောက်ရှိပါက နိုင်ငံဝန်ထမ်းအဖြစ်(၄)နှစ် ပြန်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူ ၊ဖြစ်ရပါမည်။ လျှောက်လွှာဖြည့်ရမည့် ပုံစံ ၁။ အမည် (မြန်မာဘာသာဖြင့်) - (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်ဆမ/သ/သနသအမှတ် - ၂။ အဘအမည် - နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် - အလုပ်အကိုင် - ၃။ အမိအမည် - နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် - အလုပ်အကိုင် - ၄။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည် - နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် - အလုပ်အကိုင် -၅။ အသက်(မွေးနေ့သက္ကရာဇ်) - ၆။ လူမျိုးနှင့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ - ၇။ ပညာအရည်အချင်း - ၈။ လက်ရှိရာထူးနှင့်ဌာန - ၉။ စတင်အမှုထမ်းဆောင်သည့်နေ့နှင့်အမှုထမ်းသက် - ၁၀။ အမှုထမ်းရာဇဝင်အကျဉ်း ၁၁။ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာနှင့်တယ်လီဖုန်းအမှတ်နှင့် Email Address - ၁၂။ ပြည်တွင်း၌တက်ရောက်ခဲ့သောဘွဲ့နှင့်အောင်မြင်ခဲ့သော (ခုနှစ်၊ လ၊ ရက်) - ၁၃။ ပြည်ပသို့ (၆)လနှင့်အထက် သင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့ဘူးပါက သွားရောက်ခဲ့သည့်နိုင်ငံ၊ သင်တန်းကာလ(ရက်၊ လ၊ နှစ်အတိအကျဖော်ပြရန်) ၁၄။ ပြည်တွင်း/ပြည်ပဘွဲ့လွန်သင်တန်းတက်ရောက်နေခြင်း(သို့မဟုတ်)တက်ရောက်ရန် ရွေးချယ် ခံထားရခြင်းရှိ/မရှိ ၁၅။ ပြည်တွင်း/ပြည်ပသင်တန်းတစ်ခုခုသို့ တက်ရောက်ဆဲဖြစ်ပါက ဖြေဆိုခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။ ၁၆။ လျှောက်ထားသည့်သင်တန်း ------- ၁၇။ လိုအပ်မည့်စာရွက်စာတမ်းများ (က) လွန်ခဲ့သော(၆)လအတွင်း ရိုက်ကူးထားသော ပါတ်စ်ပို့အရွယ်ဓါတ်ပုံ(၃)ပုံ (ခ) အသက်မှန်ကန်ကြောင်းထောက်ခံစာမိတ္တူ (ဂ) ဘွဲ့လက်မှတ်မိတ္တူ ၁၈။ အချက်အလက်အားလုံးပြည့်စုံစွာဖော်ပြပြီး သင်တန်းသားကိုယ်တိုင် မိမိကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ရေးထိုးတင်ပြရမည်။ ၁၉။ လျှောက်လွှာများကို မိမိတို့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့်ဦးစီးဌာနသို့ တိုက်ရိုက်ပေးပို့လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ ၂၀။ ကျန်းမာရေးလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဦးစီးဌာနထံ ကြိုတင်လျှောက်လွှာပေးပို့ရန်မလိုပါ။ ၂၁။ သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနှင့်တက္ကသိုလ်များမှာ သင်တန်းသား၏ လျှောက်လွှာပါအချက်အလက်များ မှန်ကန်ပြည့်စုံကြောင်းနှင့် သင်တန်းဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့်ကို ထောက်ခံမထောက်ခံဖော်ပြ၍လျှောက်လွှာ များနှင့် တကွ ဤကျန်းမာရေးလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်သို့ (၁၂-၉ -၂၀၁၈)ရက်နေ့ (၁၆:၀၀)နာရီနောက်ဆုံးထားပေးပို့ရမည်။ ၂၂။ သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနနှင့်တက္ကသိုလ်များမှတဆင့် စိစစ်ထောက်ခံပေးပို့ခြင်းမရှိသည့် လျှောက်လွှာများကို စဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ။ သတ်မှတ်ထားသော အရည်အချင်းနှင့်ပြည့်စုံသူများသည် (၁၄-၉-၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် အရည် အချင်းစစ်ရေးဖြေစာမေးပွဲကိုဖြေဆိုရမည်။ ရေးဖြေစာမေးပွဲတွင်ကျွမ်းကျင်မှုဘာသာရပ်အဖြစ်(၃)နာရီ မေးခွန်းလွှာနှင့် အင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်အဖြစ် (၂)နာရီ မေးခွန်းလွှာတို့ကို ““ဆေးပညာသင်ကြားရေး ဗဟိုဌာန၊ ကျန်းမာရေးလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဦးစီးဌာန၊ရန်ကုန် ” တွင်ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ ခုံအမှတ်စာရင်းနှင့်စာမေးပွဲအချိန်စာရင်းကို (၁၃-၉-၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် ဆေးပညာသင်ကြားရေးဗဟိုဌာန၊ ကျန်းမာရေးလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်ရှိ ကြော်ငြာသင်ပုန်းတွင် ကြေညာထားမည်ဖြစ်ပါသည်။ မှတ်ချက်။ - လျှောက်လွှာပိတ်ရက်နောက်ပိုင်းမှရောက်ရှိလာသော လျှောက်လွှာများနှင့် ပြည့်စုံခြင်း မရှိသော လျှောက်လွှာများကို လက်ခံစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ - စာမေးပွဲလာရောက်ဖြေဆိုသည့်အခါ ပတ်စ်ပို့အရွယ်ဓာတ်ပုံ(၁)ပုံ၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား၊ ဘွဲ့လက်မှတ်များကို တင်ပြရပါမည်။ - အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ် | စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ -(၀၆၇-၄၁၁၁၇၉ ညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၆၇-၄၁၁၂၃၈ နိုင်ငံခြားဆက်သွယ်ရေးဌာနစိတ် ကျန်းမာရေးလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဦးစီးဌာန။ - ၀၆၇-၄၁၁၁၄၈ နိုင်ငံခြားဆက်သွယ်ရေးဌာနစိတ် ၀၆၇-၄၁၁၁၄၉ ကျန်းမာရေးလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဦးစီးဌာန။ လိုင်းခွဲ-၈၀၉ မိမိတို့ တက်ရောက်လိုသည့် သင်တန်းကျောင်းများနှင့် ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများကို ရှာဖွေလိုပါက ဒီ Link မှာရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ ပညာရေးလမ်းညွှန်website တွင် ပါဝင်သောသင်တန်းများ၊ ကျောင်းများ၊ Scholarship၊ Knowledgeများနှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များကို ၀င်ရောက်ရှာဖွေ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ source: ministry of health and sports
662, Atthaka 22nd St., Ward (10),South Okkalapa ,Yangon Region
72, Marlar Myaing 3rd St.,Hlaing,Yangon Region
Kha/211, Dhama Parla St., Beside Kyauk Yay Twin Bridge,North O...